ဦး နှောက် - ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်ပွင့်လင်းသော Cross-Platform App | Linux မှ
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာများအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်အောင် သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများ၏စားပွဲခုံပေါ်မှာ။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးအတွက်တော့ငါတို့ထပ်ပြီးပြောကြ ဦး မယ် ဦး နှောက်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သော ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် Cross- ပလက်ဖောင်း application ကိုကြောင်းသဘောအလွန်အသုံးဝင်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်, ဦး နှောက် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Launcher၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များအကြား၊ ရှာဖွေခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုကွန်ပျူတာပေါ်နှင့်ပိတ်ရန်တိုးတက်စေသည်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးစကားပြော ဦး နှောက်တွင် FromLinuxသူက ဇန်နဝါရီလ 27 2017ကအပေါ်အခါ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနံပါတ် 0.2.3။ ထိုနောက်မှဤလျှောက်လွှာသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြောင်းအလဲကိုခံယူခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလ52017ထုတ်ဝေသည့်အခါ လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနံပါတ် 0.3.2.
ကြောင်းယခင်အခွင့်အလမ်းအတွက်ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့သည် ဦး နှောက် အဖြစ်:
"၎င်းသည် multiplatform ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Alexandr Subbotin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ဂဏန်းတွက်စက်၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးချခြင်းတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။".
Brain နှင့်အတူ Linux ပေါ်တွင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်
အဘယ်သူ၏ သော့ချက် features တွေ ဆီသို့ ဦး တည် အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအား ဖြစ်ခဲ့သည်:
တစ်ခုတည်း application ကိုအတွက်များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ default အနေနဲ့ပေါင်းစည်းမှု။
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ (ဖိုင်များ / ဖိုလ်ဒါများ) ၏ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ဖိုင်စနစ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ပလပ်ဂင်များကိုကြီးထွားရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အားကောင်းသော API ဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောဖြတ်လမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 Cerebro: ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်ပွင့်လင်းပြီးပလက်ဖောင်းအက်ပလီကေးရှင်း
1.1 Cerebro ကို၎င်း၏တည်ငြိမ်သော version 0.3.2 တွင်တပ်ဆင်ခြင်း
1.1.1 .Appimage ဖိုင်ကိုအသုံးပြုသည်
1.1.2 .deb ဖိုင်ကိုအသုံးပြုသည်
1.1.3 အခြားရွေးချယ်စရာ repositories ကိုအသုံးပြုခြင်း
1.2 ထည့်သွင်းခြင်း bug ကိုပြုပြင်ခြင်း
1.2.1 Brain Execution ကိုမှန်ကန်စေပါ
Cerebro ကို၎င်း၏တည်ငြိမ်သော version 0.3.2 တွင်တပ်ဆင်ခြင်း
အဆိုပါအညီ Brain အက်ပလီကေးရှင်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများကိုရနိုင်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များGNU / Linux လိုမျိုး format နဲ့ installable source ဖိုင်တစ်ခု .AppImageမိမိအခုနှစ်မှာ 0.3.1 ဗားရှင်း။ နေစဉ် အီလက်ထရွန်နည်းပညာ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်း၏အသုံးချပရိုဂရမ်တွင်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည် ဦး နှောက်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည့်အရင်းအမြစ်ဖိုင်များပုံစံများဖြင့်ရရှိနိုင်သည် .AppImage y debဒါပေမယ့်သူ့၌တည်၏ 0.3.2 ဗားရှင်း။ ဒီလျှောက်လွှာမှာလည်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုရှိတယ် GitHub.
ထည့်သွင်းရန် ဦး နှောက် ဤ installer ပုံစံကို အသုံးပြု၍ ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးနောက်အောက်ပါ command command များကိုသာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာ repositories ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကြိုက်သူတို့အဘို့ repositories မှတဆင့် applications များ install လုပ်ပါ၎င်းတို့သည်အောက်ပါဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းပါဝင်သောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည် .deb ဖိုင် သောကို install ပါလိမ့်မယ် ရရှိနိုင် repositories ကို ဟုဆိုသည်ဟုဆိုသည်က်ဘ်ဆိုက်၏ Duck JAD - Repository။ ပြီးရင် install လုပ်ဖို့ဆက်လုပ်ပါ download လုပ်ထားတဲ့အထုပ် လျှောက်လွှာ ဦး နှောက် အောက်ပါ command command များကို execute:
လျှောက်လွှာကို install ပြီးနောက် ဦး နှောက်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းမှပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ဆောင်ရန်သာရှိသည် Menu / Accessories အပိုင်းကိုစတင်ပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုအားခြစ်ရာမှအကဲဖြတ်ရန်သင့်ကွန်ပျူတာကိုလုံးဝပြန်လည်စတင်ပါ။
ထည့်သွင်းခြင်း bug ကိုပြုပြင်ခြင်း
အသုံးပြုသူများသည်သတင်းပို့နိုင်သည် လျှောက်လွှာကွပ်မျက်ကျရှုံးဆိုလိုသည်မှာ graphical interface ၏ non-execution သည် ဦး နှောက်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။
root console တစ်ခုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ command များနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဖိုင်၏ contents တွင် parameter ၏တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲပါ "trackingEnabled" de True အားဖြင့် False။ အပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်၏မှန်ကန်သောကွပ်မျက် retest ဦး နှောက်။
အောက်ပါ၌ဤဖြေရှင်းချက်ကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ link ကို.
Brain Execution ကိုမှန်ကန်စေပါ
အကယ်၍ ဒီဟာဖြေရှင်းနည်းပါ၊ အံ့ဖွယ် ၂.၀၏အစွန်းရောက်စိတ်ကြိုက်နှင့် optimization သော MX Linux ကို 19, အလှည့်တွင်အခြေခံသည် ဒေဗန် ၁၀၊ ၎င်းကို taskbar ပေါ်ရှိအိုင်ကွန်တစ်ခုဖြင့် minimize လုပ်ပြီး execute လုပ်သောအခါတွင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုမှ စ၍ မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်သာကျန်တော့သည် ဦး နှောက်နှင့်အချို့ install လုပ်ပါ ရရှိနိုင် plugins ကို သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရန်သင်ယူပါ ဤကိရိယာ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို GNU / Linux တွင်အများဆုံးထားပါ.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Cerebro», စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သော ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် Cross- ပလက်ဖောင်း application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာများရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Brain - ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပွင့်လင်းသော Cross-Platform App တစ်ခု
ဒါကိုမကြာသေးခင်ကမှ update လုပ်ပြီးပြီလား GNU / Linux တွင်မပါရှိသော်လည်း QuickSilver (QS) ကိုအစားထိုးရှာဖွေသည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းအမှန်တရားမှာအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အမှန်တရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်ကိုမမှတ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်သည် Kupfer ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မပြီးပါ။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအခြေခံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
၎င်းတွင် (သေချာပေါက်ပလပ်အင်များရှိသည်) ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောရွေးစရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် QS နှင့်ဆင်တူသည့် interface ရှိသဖြင့်ငါ့ကိုသိကျွမ်းစေသည်။
ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာ“ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနံပါတ် ၀၃.၂ ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်” ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးအလွန်အသုံးဝင်သော add-ons များ (plugins) များရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားပရိုဂရမ်းမင်းဗဟုသုတရှိသူများဖန်တီးထားသောပလပ်အင်အသစ်များကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Cerebro အကြောင်းအနည်းငယ်လေ့လာလိုပါကအောက်ပါ ၃ ခု၏ဒုတိယအပိုင်းကိုအကြံပြုလိုပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ဒုတိယအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အသုံးပြုပုံကိုရှင်းပြပြီးမကြာခင်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးမှာအလွန်အသုံးဝင်တဲ့ add-ons အချို့ကိုကိုင်တွယ်ပုံကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။
သေချာတာပေါ့၊ အနာဂတ်ပို့စ်တွေမှာကျွန်တော် Cupbro အစားထိုး Kupfer နဲ့ Albert လိုမျိုးပြောမယ်။
ဝေါလ်တာ! ဤနောက်ဆုံးရေးသားချက်တွင် ( https://blog.desdelinux.net/albert-kupfer-excelentes-aplicaciones-alternativas-cerebro-productividad/ ) Ulauncher သည် RAM memory အရင်းအမြစ်များစွာကိုအသုံးပြုသောကြောင့် Ulauncher ကိုကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးခဲ့သည်။ Brain ကိုအစားထိုးရန်မဟုတ်ဘဲဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါ Cerebro နှင့်အတူတိုးချဲ့စရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
Git 2.27.0 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်ပြီး၎င်းပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည်